Reer Örebro iyo Qashinka | Somaliska
Magaalada Örebro ayaa dhaqan galineysa go'aan cusub oo lagu ganaaxayo dadka qashinka ku rida goobta aan ku habooneyn. Maamulka magaalada ayaa ka daalay la hadalka dadka ayagoo si ay u xaliyaan dhibaatadaan kaamirooyin ku xiraya goobaha la dhigo bokisyada qashinka oo dadka lagu arko iyagoo qashin ku ridaya bokis aan kiisa ahayn la ganaaxi doono. Dadka lagu qabto iyagoo dambigaan ku jira marka koowaad ayaa warqad digniin ah loo diri doonaa. Kuwa marka labaad lagu qabto ayaa la ganaaxi doonaa lacag. Kuwa marka sadexaad lagu qabto ayaa la sheegay in talaabo laga qaadi doono aan la cadeyn nuuceeda. Maamulka magaalada Örebro ayaa sheegay kala bar dadka ku nool magaalada in ay ku ridaan qashinka bokis aan kiisa ahayn. Sveriges Radio
Magaalada Örebro ayaa dhaqan galineysa go’aan cusub oo lagu ganaaxayo dadka qashinka ku rida goobta aan ku habooneyn. Maamulka magaalada ayaa ka daalay la hadalka dadka ayagoo si ay u xaliyaan dhibaatadaan kaamirooyin ku xiraya goobaha la dhigo bokisyada qashinka oo dadka lagu arko iyagoo qashin ku ridaya bokis aan kiisa ahayn la ganaaxi doono.
Dadka lagu qabto iyagoo dambigaan ku jira marka koowaad ayaa warqad digniin ah loo diri doonaa. Kuwa marka labaad lagu qabto ayaa la ganaaxi doonaa lacag. Kuwa marka sadexaad lagu qabto ayaa la sheegay in talaabo laga qaadi doono aan la cadeyn nuuceeda.
Maamulka magaalada Örebro ayaa sheegay kala bar dadka ku nool magaalada in ay ku ridaan qashinka bokis aan kiisa ahayn.